February 28, 2018 F.G 0
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waraaqaha Aqoonsiga ka guddoomay Danjiraha cusub ee dalka Spain u qaabilsan Soomaaliya Mudane Javier Garcia De Viedma. Madaxwaynaha iyo Safiirka oo ay weheliyaan Wasiir Ku Xigeenka Wasaaradda Arrimaha Dibadda Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo Diblumaasiyiin ka tirsan labada dal ayaa ka wada hadlay xoojinta xiriirka labada dhinac iyo Arrimaha ay ka rajaynayso Dowladda Federaalka Soomaaliya in dowladda Spain ay kala shaqayso. Madaxwayne Farmaajo ayaa tilmaamay in mudnaanta ay siineyso Dowladda Federaalka Soomaaliya xoojinta xiriirka caalamiga ah, kaas oo dhabaha u xaaraya sidii Soomaaliya ay u kasban lahayd saaxiibo caalami ah oo kala shaqeeya xaqiijinta hiigsiyada la xiriira dabar-goynta argagixisada, iskaashiga dhaqaalaha iyo dhisidda ciidan Qaran oo hanan kara amniga guud ee dalka. Danjire Javier Garcia De Viedma ayaa Madaxwaynaha u soo gudbiyey farriin uu uga siday Boqorka dalka Spain Mudane Felipe Juan Pablo oo dhigeysa in ay garab taaganyihiin Shacabka iyo Dowladda Soomaaliyeed.
Suuq Madow ee Carruurta Lagu iibiya Miyaa Ka jira Degaanada Somaliland?
Waa dhacdo ugub ah oo aan gayiga Soomaaliyeed inta badan lagu aqooni jirin, sida uu kusoo waramayo wariyaha BBC-da ee Hargaysa. Maxkamadda rafcaanka Hargaysa, ee Somaliland ayaa labo qof oo lagu kala magacaabo Cabdiraxmaan Cabdullaahi Xasan iyo Khadra Cabdullaahi Maxamed midkiiba ku xukuntay labo sano iyo lix bilood oo xabsi ah, kadib markii lagu heley in ay ilmo ka xadeen qoys. Waxaa la sheegay in qof ka mid ah dadka la xukumay uu ilmo ka kaxaystay magaalada Hargeysa, ilmaha waxaa dhalay reer ay qaraabo ahaayeen qofkan, wuxuuna geeyay magaalada Abaarso, kadibna waxaa la qabtay iyaga oo ilmaha yar dalka dibedda uga dhoofinaya. Lama oga ujeedka rasmiga ah ee ku kaliftay in ay ilmaha wataan, balse waxaa la qabaa tuhun ah in uu jiro suuq madoow oo carruurta looga ganacsado, waxaana arrintan sii xoojinaya Guuleed Dafac oo ah madaxa hay’adda xuquuqda aadanaha oo yiri “Marka laga qiyaas qaato cabashooyinka dadka ka imanaya, dhoofinta carruurta waa ay badatay, waxayna ku dhacdaa dadka ciyaalka ah ee ka yar 15 jirka, dhibta jirtaa waxaa weeye sharcina noogama dagsana, wacyiga [Sii aqri]
SAWIRO:Madaxweeyne Axmed Madoobe iyo Safiirka Talyaniga ee Somaliya Oo Kulmay
Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Jubbaland Mudane Axmed Maxamed Islaam ayaa maanta Aqalka Martida ee Magaalada Kismaayo ku qaabilay Danjiraha Dowlada Talyaaniga u fadhiya Soomaaliya Carlo Campanile. Madaxweynaha iyo Danjiraha ayaa ka wada hadlay xaalada soomaaliya gaar ahaan Amaanka iyo dib u kabashada Degaanada Jubaland. Kulanka Madaxweynaha iyo Safiirka waxaa kale oo diirada lagu saaray hananka maalgashiga Talyaaniga oo wakhtigii Dowladii Dhexe maalgalin xoog leh ku sameeyay dalka. Madaxweynaha Jubbaland Mudane Axmed Maxamed Islaam ayaa sheegay in ay ka wada hadleen Danjiraha sidii dib boorka looga jafi lahaa mashruucyo iyo ilo maalgashi oo Talyaanigu kal hore ka hirgaliyay deegaanka si gaar ahna in ganacsatada Talyaanigu ay u furan tahay in ay deegaanka maalgashadaan. Arimaha nabadgalyada ayuu Madaxweynahu Dowlada Talyaaniga ku booriyay in ay laban laabto tageeradeeda dhinaca amaanka si xasiloonidu u noqoto mid adag oo aan liiq liiqan. Dhinaca kale Danjire Carlo Campanile ayaa amaanay dadaalka Jubbaland ee nabadgalyada iyo dib u dhiska isagoo sheegay in ay maalgalin ku samayn doonan deegaanka isla markana dhinaca amaanka ay Soomaaliya oo dhan wax weyn kala qabanayaan. Safiirka ayaa booqday [Sii aqri]
Maxay Ka Wada Hadleen Wafidiga Masar iyo Maamulka Puntland Somaliya
Madaxweynaha Mamul goboleedka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa maanta oo ay taarikhdu tahay 28 Feb 2018 waxaa uu Magaalada Garoowe kula Kulmay wafdi balaaran oo uu hogaaminayey wasiirka beerha Soomaaliya Saciid Xuseen Ciid iyo qunsulka safaarada masar ee Soomaaliya Taamir Safwat. Wafdigaan balaaran ee maanta soo gaaray Puntland ayaa waxaa kamid ahaa masuuliyiin ka socotey Wasaaradda beeraha ee dalaka Masar, kuwaas oo uu kamid ahaayeen Madaxa mashaariicda beeraha ee wadamada Afrika Dr. Maahir Abdulmuncim, Axmed Qunaim-Madaxa xiriirka Dibada Wasaaradda Beeraha Masar, Dr. Attiya Mansuur- Khabiir Biyaha iyo Deegaanka. Madaxweynah Puntland oo kulan gaar kula qaatay xafiiskisa wafdigaasi marka ay soo gaareen qasriga madaxtooyada, ayaa kulankaas waxaa kala qayb galay Wasiirka Deegaanka Puntland, Wasiirka Xanaada Xoolaha Puntland, Wasiir ku xigeenka Wasaaradda Beeraha iyo waraabka Puntland iyo Saraakiil ka tirsan xafiiska Madaxweynaha. Qunsulka Dawladda Masar ee Soomaaliya mudane Taamir Safwat ayaa uga mahad naqay Puntland sida wanaagsan ee loogu soo dhaweeyay caasimada Puntland islamar ahaantaana sheegay inuu salaan uga wado dawladdiisa Madxweynaha Puntland, sidoo kalana sheegay in Dawladda Masar ay dooneyso inay ka fuliso mashaariic horu [Sii aqri]
SAWIRO:Jen:Maxamuud Koronto Oo Yiri”Howlgalo ayaan Ka Bilaawnay Wadada Balcad iyo Jowhar”
Taliyaha Ciidamada Qeeybta 27aad ee Ciidamada Xooga dalka soomaliya Jeneral: Maxamuud Maxamed Macalin Koronto ayaa Maanta Kormeer Ku Tagay Degaanada Haanta-sheekh oo u dhow tuulada Gololeey ee degmada Balcad halkaas oo weeraradii ugu darnaa ay Al-Shabaab ka geysan Jireen. Taliyaha Waxaa La Socday Ciidamo dheeraad ah Oo Halkaasi la geeyay ayadoo Lagu Biirinaayo Ciidamadii Horay u Joogay Wadada xiriirisa Balcad iyo Magaalada Jowhar ee Xarunta Maamulka Hir-Shabeelle. Sidoo kale Taliska qeybta 27,d ee Ciidamada xooga dalka Soomaaliya ayaa bilaabay howlgal Rondo ah oo ay wadadaas ka sameynayaan Ayagoo Hubinaayo Amniga iyo Isku Socdka Magaalooyinka Jowhar iyo Blacad . Ugu danbeeyntii Taliyaha ayaa sheegay in ay Hubinayaa Wadada xiriirisa Balcad ilaa Jowhar Ciidamada Si aysan u dhicin weeraro ka yimada dhanka Al-Shabaab. Waxaana uu sheegay in ay ku dadaalayaan in wadadaas asyan xirmin isla markaana waqtigaan ay tahay mid amni ah oo cidkasta ay mari karto, Sida uu Sheegay Taliyaha Ciidamada Qeybta 27aad Jen;Maxamuud Koronto,
CIIDAMADA DOWLADDA OO ISKAGA BAXAY, MOQOKORI EE G/HIIRAAN
Arroornimadii hore ee saakay ayaa Ciidamada dowladda Soomaaliya oo ay wehlinayeen tiro yar oo ka tirsan ciidamada Itoobiya waxa ay dagaal kula wareegeen deegaanka Moqakori ee Gobolka Hiraan oo ay maamulayeen Al-Shabaab balse waxaa haatan la sheegayaa in ay isaga baxeen Ciidamada dowladda. dadka Degaanka ayaa sheegayaa in mudo Saacado ah oo ay ciidamada isgarabsanayay ay ku sugnaayeen deegaanka Moqokori ay sinabad ah uga soo baxeen. Saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ayaa ka gaabsaday in ay ka hadlaan,waxana wararkii u dambeeyay ay sheegayaan in deegaanka Moqakori uu Maanta yahay mid haawanaya oo aan cidna ka talin. Dadka deegaanka qaarkood ayaa sheegaya in weli Al-Shabaab aysan soo gelin deegaankaas isla markaana ay dhaq dhaqaaqyo ka wadaan Magaalada duleedkeeda. Ciidamada Dowladda ee saakay qabsaday deegaanka Moqakori ayaa ka baxay degmada Matabaan ee isla Gobolka Hiiraan balse ugu dambeyn ay barqadii Maanta isaga soo baxeen.
Wasiir Bayle Oo Yiri “Dadka Waa in ay Canshuurta Bixiyaan Ama isaga Tagaan”
Wasiirka Wasaarada Maaliyadda ee Xukuumada Soomaaliya C/raxmaan Ducaale Bayle oo Warbaahinta kula hadlay Xafiiskiisa ayaa ka warbixiyay waxyaabihii u qabsoomay bishaan febraayo ee maanta ku eg. Wasiir Bayle ayaa Sheegay shaqo joojintii Ganacsatada ay bishaan sameeyeen in uu saameeyay lacagihii soo gali jiray Wasaaradda Maaliyadda. Sidoo kale Bixinta Mushaaraadka ayuu sheegay in loogu tala galay dhamaadka bisha in la bixiyo, balse qeybo kamid ah ay bixiyeen, halka kuwa kalana ay qorsheynayaan in ay bixiyaan. Waxa uu tibaaxay in aanan wadan iyo madax banaani la sheegan karin, hadii aanan la bixin Canshuurta, maadaama dalka wax qabadkiisu lagu fuliyo. Hoteelada iyo goobaha wax lagu cabo ayuu sheegay in ay dhaqan geliyeen bixinta Canshuurta Iibka, iminkana ay biirinayaan Bankiyada, Xawaaladaha, Shirdaha Biyaha iyo Korontada iyo kuwo kale. “Qaskii dhacay ee sababay in Goobaha Ganacsiga la xiro, waxa ay na dhaxalsiyeen in wax badan ay soo bixi waayaan bisha aan hadda Joogno, Balse waxaan ku kalsoon nahay in aan bixin karno Mushaaraadka oo qaarkood shalay iyo daraad aan saxiixay” ayuu yiri Wasiir Bayle. Waa uu sii hadlay waxa uuna [Sii aqri]
Ciidamada Dowladda Oo Qabtay Gaari Ay Ka Buuxaan Waxyaabaha Qarxa Iyo Ragii Watay
Wararka Laga Helaayo Gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in ciidamada Dowladda Soomaaliya ay gacanta ku dhigeen Gaari laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa hub iyo Rag la socday. Saraakiisha ciidamda dowladda ee gobolka Hiiraan ayaa sheegay in howlgal ay ka sameeyeen Xaafada Buundoweyn ay ku soo qabteen 13 Ruux oo looga shakiyay in ay ka tirsan yihiin Al-Shabaab Gaari ay ka buuxaan Birihii qaraxyada laga sameynayay iyo Hub kale. Sidoo kale Abaaduulaha Ciidamada Xooga dalka Soomaaliyeed, qaybta Gobolka Hiiraan Isaaq Idiris Cismaan ayaa soo bandhigay 13 qof ee howlgalka lagu soo qabtay Gaariga ay ku raran yihiin Biraha laga sameeyo waxyaabaha qarxa iyo hubka,waxa uuna sheegay in dadkaas baaritaan lagu sameyn doono.
Maxaa Ka Jiro in Weeraro La Sheegay in ay Ku Soo Wajahan Yihiin Muqdisho.
War Ka Soo baxay Xafiisyada QM iyo Safaaradaha Shisheeye ee ku yaalla Xerada Xalane ayaa Bixiyay Digniin amni ah oo ku saabsan weeraro ku wajahan Bartilmaameedyo ku yaaala Magaaladda Muqdisho. Goobaha laga digay in weeraraddu ka dhici karaaan waxaa ka mid ah Hotello ku yaalla Magaaladda Muqdisho Gaar ahaan Wadadda makaa Al- mukarama iyo Garoonka Diyaaradaha Muqdisho, Hase ahaate Weeradda nuuca ay yihiin lama Faaah faahin. Sidoo kale inta badan Hotellada ku yaalla Waddadada Maka Al-mukarama ayaa marti galiyay weerarro Al-shabaab ay ku qaadeen oo ismiidaamin iyo weeraro toos ah isugu jiray. Hotellada iyo garoonka Diyaaaradaha ee Muqdisho ayaa bartilmaameedyo u ah Al-shabaab oo horay weerarro uga geeystayn goobahaas, tiro dhowr jeer ah ayey Al-shabaab weerareen Garoonka Diyaaradaha iyo Xerada Xalane. Dad shacab ah iyo Saraaakiil Doowladeed ayaa ku dhintay weeradddi Al-shabaab ay horay uga geysteen goobha digniintu ku wajahantahay. Digniinta amni ee ay Soo saareen Xafiisyada QM iyo safaaradaha ku yaala Xalane ma ahan mid si guud loo faafiyay laakiin waxaa la siiyay Shaqaalaha Xarumahaas u shaqeeya oo looga digay in aysan tagin [Sii aqri]
Golaha Wasiirada Hirshabeelle oo ansixiyay miisaaniyada sanadka 2018
Madaxweynaha maamulka Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare ayaa shir guddoomiyey kulanka Golaha Wasiirada Hirshabelle. kulanka oo Ka Dhacay Madaxtooyada Hirshabelle ee Magaalada Jowhar waxaana lagu ansixiyey miisaaniyadda sanadkaan 2018 uu ku shaqeyn doono maamulka. Sidoo Kale Shirkani waxaa goob joog ka ahaa Madaxweyne ku xigeenka Hirshabeelle Cali Guudlaawe Xuseen, waxaana Wasaaradda Maaliyadda maamulka Hirshabelle ay Golaha Wasiirada u soo gudbisay Miisaaniyada ay ku shaqeyn doonto sanadkani, iyadoo ay ka koobantahay dakhliga gudaha ka soo xerooda iyo deeqaha laga helo Dowladda Dhexe iyo hey’adaha caalamiga ah, miisaaniyada ayaa gaareysa wadarta guud $ 8,556,34. Miisaaniyadani ayaa inteeda badan ku bixi doonta dhinacyada ammaanka, adeegyada bulshada, mashaariic horumarineed iyo bixinta musharaadka shaqaalaha rayidka ah iyo ciidanka Dowladda Hirshabelle. “Miisaaniyadda maamulka Hirshabelle waxay ka kooban tahay dakhli iyo kharash si cad u daahfuran oo isla-xisaabtan ku salaysnaan doona, waxaana Wasaaradda Maaliyadda ay Sameysay bilow saldhig u ah horumar dhinaca maaraynta dhaqaalaha, Hirshabelle waxay amba qaadeysaa inay sii horumariso hay’adaheeda kale duwan, gaar ahaan kuwa maaliyada oo muhiimad weyn inoo leh sidaasi waxaa yiri Madaxweynaha Dowladda Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare. Ugu [Sii aqri]